Qalab ku jira iOS 13 wuxuu muujinayaa muraayadaha indhaha ee Apple | Wararka IPhone
Xanta, daadinta, kuwa suurtagalka ah, kuwa aan suurta galka aheyn iyo wararka kale ayaa gaaraya meeshii ugu sareysay maalmahaan kahoreeyay xusid mudan Talaadada soo socota, Sebtember 10. Apple-ka wax walboo ay diyaariyeen, haa, laakiin intay raacayaan xantooda iyo waxyaabaha suurtogalka ah ee ka soo baxa alaabada, softiweerka iyo kuwa kale sidoo kale.
Xaaladdan oo kale, muraayadaha Apple ee la kordhiyay (AR) muraayadaha ayaa mar kale u muuqda hore ka dib markay ka soo muuqdeen dukumiintiyada gudaha ee iOS 13 qalabka loo yaqaan 'StarTester' iyo StarBoard. Qalabkani wuxuu u oggolaanayaa shaqooyin kala duwan muraayadaha AR ee suurtogalka ah ee ragga ka socda Cupertino.
Leh saadaalin ee falanqeeyaha caanka ah ee Ming-Chi Kuo, kuwa kala duwan patents ama xanta ku saabsan isbahaysi oo leh shirkado kala duwan oo laxiriira xaqiiqda soo korortay waxay had iyo jeer ahaayeen kuwa maalin walba ka shaqeeya warbaahinta hadana markale helitaanadan kujira macruufka macruufka ah ee iOS 13 ayaa mar labaad soo noqnoqda.
Muraayadaha muraayadaha daaran oo xiro markaad xirto
Tani waxay noqoneysaa shaqada laga helay koodhka macruufka oo ah qaab loo adeegsado muraayadaha shirkadda. Sidan oo kale, markii aad dhajisid muraayadahaas loo maleynayo, si otomaatig ah ayaa loo shaqeysiin doonaa markii aad iska bixisona waa la furi doonaa. Dabcan dhowr faahfaahin oo xiiso leh ayaa ku jira laakiin wararka xanta ah waa kuwo iska hor imanaya marka la eego arintan oo dhamaantood isku jiho uma socdaan oo ku saabsan suurtagalnimada soo bandhigida muraayadaha noocan oo kale ah Apple.
Waan ka fikiri karnaa taas qodobka muhiimka ah ee iPhone ka hadal wax ku saabsan ama xitaa na tusi nooc ka mid ah qalabka Taasi waxay dib u xaqiijineysaa shaqada Apple ee qaybtaan, laakiin markasta waxaas oo dhami waxay u muuqdaan kuwo ku habboon bilowga 2020 ama xitaa rubuca labaad ee sanadka soo socda. Waan arki doonaa waxa runta ah ee xanta ah laakiin waxaa jiray hadalhayn ku saabsan muraayadaha indhaha ee Apple muddo dheer aakhirkana waxaan leenahay dareen ah inay ku dambeyn doonaan imaatinkooda. Adiguna?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Qalab ku jira iOS 13 wuxuu muujinayaa muraayadaha indhaha ee Apple
Galaxy Note 10 + wuxuu ka fiicnaanayaa iPhone XS Max waxqabadka